स्वास्थ्य-शिक्षा « Rara Pati
‘मंकीपक्स’ भाइरस खाडी मुलुकसम्म पुग्यो, पाँचै दिनमा १२ देशमा फैलियो
काठमाडौं । गतसाताको अन्त्य ९जेठ,६ गते० तिरमात्र सात देश पुगेको ‘मंकीपक्स’ अहिले विश्वका १९ देश पगिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले जनाएको छ । डब्लूएचओका अनुसार ‘मंकीपक्स’ अफ्रिका, युरोप, अमेरिका
काठमाडौं । निजी विद्यालयहरूले सातामा दुई दिन बिदा नदिने भएका छन् । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, हिसान र एनप्याब्सनले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय अमान्य भएको जनाएका हुन्
स्थानीय तहले शिक्षामा गर्ने सशर्त अनुदान बाहेकको रकम दोब्बर गर्ने । सम्भव छ र ! सबैले दोब्बर गर्न सक्छन् र ! सबै पालिकाहरूमा आवश्यक छ र ! काम्लोमा सातु जस्तो
यसको मतलव संस्थागत स्कुलहरू र सञ्चालकहरूलाई छाडा छाडौं भन्ने कदापि होईन । तीं संस्थाहरू भित्र भएको व्यापारिकरणलाई रोक्नु सरकारको दायित्व हो । यसका विरूध्द सबैजनाले आवाज उठाउनु पर्छ । सेवामुखी
सुर्खेत । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको दोस्रो दीक्षान्त समारोह स्थगित गरिएको छ । यही १६ चैतका लागि निर्धारित दीक्षान्त समारोह अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार
महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित कान्तिपुर डेन्टलका संचालक दिलीप भनिने संजयकुमार महतोलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उपचार सम्बन्धी कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि २ वर्षदेखि
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी बुहारीलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पाएका ती
कक्षा १२ को परीक्षा जेठ १६ गतेबाट हुने
काठमाडौं । कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आगामी जेठ १६ गतेदेखि हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आज बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षा जेठ १६ गतेदेखि २५ गतेसम्म
कुर्ची नभएको एक नमूना कक्षा
बढ्दो लगानी, बढ्दो आवश्यकता, विकसित प्रविधि र प्रतिस्पर्धात्मक समाजका कारण शिक्षा क्षेत्रमा सबैको चासो बढेको छ । हुनपनि हरेक व्यक्ति, समुदाय र सिङ्गो देशको रूपान्तरणको प्रमुख कडिको रूपमा रहेको जनशक्ति
कोराना संक्रमणबाट विश्वभर करिब ६० लाखको मृत्यु
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीमा कोभिडजन्य संक्रमणका कारण विश्वभर करिब ६० लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार शुक्रबारसम्म विश्वभर कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या